Myanmar IT Resource Forum » Garbage » Gmail Hack
1 Gmail Hack on 31st March 2010, 9:51 pm
Special Service မှာ Gmail Hack တဲ့အစီအစဉ်မပါဘူးလားသိချင်ပါတယ်
လုပ်မယ်ဆိုရင် အကောင့်တစ်ခုလောက် ဟက်ပေးပါ
2 Re: Gmail Hack on 31st March 2010, 9:53 pm
[You must be registered and logged in to see this link.] ကိုသူငယ်ချင်းက ငှါးပါဆိုလို့ ပေးလိုက်တာသူက pw ပြောင်းပစ်တယ်
ဟက်တတ်တဲ့လူပါရင် ဟက်လိုက်ကြပါအုံး အဲအကောင့်ကြီးကို
3 Re: Gmail Hack on 31st March 2010, 10:11 pm
Recover ပြန်လုပ်ကြည့်ပါလား ကိုသျှန်ဝေ...ဟိုတစ်ခါ ကို ET တင်ထားတဲ့ Post ထဲကလိုပေါ့....ရလောက်ပါတယ်...
4 Re: Gmail Hack on 1st April 2010, 8:24 am
သျှန်ဝေ wrote: [You must be registered and logged in to see this link.] ကိုသူငယ်ချင်းက ငှါးပါဆိုလို့ ပေးလိုက်တာသူက pw ပြောင်းပစ်တယ်
onlinehacker.95@ ဆိုတဲ့ကောင်လေးက 30000 per account နဲ့ Hack ပေးတယ်ဆိုပဲ။ မေးကြည့်လိုက်ပေါ့။
5 Re: Gmail Hack on 1st April 2010, 11:16 am
ပေါ်မှာ တွေ့ တဲ့ service ကတော့မိုက်တယ်ဗျ...
အဲဒီနည်းနဲ့ဆိုကျွန်တော့့်လည်း hack ပေးနိုင်မယ်ထင်တာပဲ
.......ဒေါ်လာ $100 တည်းနဲ့ g-mail တွေ hack နိုင်ပြီ..........
hack မယ့်လူကို $80 နဲ့ညှိကြည့်တာပေါ."ခင်ဗျားအကောင့်ဒေါ်လာ $80 နဲ့လိုချင်တယ်ဗျာ.ခင်ဗျားအသစ်တစ်ခုပြန် လုပ်လိုက်ပါလား " ဆိုပြီး..အဲဒီနည်းနဲ့ hack ရင်တော့..ဟဲဟဲ....ကြားထဲက ကျွန်တော်ကတော့ပွဲစားခ $20 လောက်ပေါ..
Last edited by solakoko on 1st April 2010, 11:23 am; edited 1 time in total (Reason for editing : using code)
6 Re: Gmail Hack on 1st April 2010, 11:34 am
7 Re: Gmail Hack on 1st April 2010, 6:37 pm
အဲဒီနည်းကတော့ကြိုက်တယ်ဗျို့ ကျွန်တော်လည်းပါမယ် ပွဲစားပေါ့ ဟုတ်ဘူးလား ဟီး
အဲ့ paypal ထဲမှာပိုက်ဆံရှိရင် screen shot ရိုက်ပြီဓာတ်ပုံလေးသာပြ
8 Re: Gmail Hack on 5th April 2010, 9:54 pm
9 Re: Gmail Hack